Notsapainay ny mpandahateny Sonos Move | Avy amin'ny mac aho
Ity mpandahateny Sonos Move ity dia efa elaela no teny an-tsena fa tsy mbola hatreto isika dia afaka nahazo ny iray tamin'izy ireo hankafy ny kalitaon'ny feo rehetra ary mazava ho azy amin'ny famolavolana. Sonos dia iray amin'ireo orinasa niatrika ny mpandahateny Apple matetika ary io dia ny orinasa Cupertino afaka nanasonia an'ity kalitao audio ity, ny fomba fiasa, ny fampifanarahana ary ny famolavolana.
Ny Sonos Move dia manome ny mpampiasa ny tombony rehetra amin'ny mpandahateny an-trano raha mamela azy ho lasa portable. Raha ny lojika dia tsy miresaka momba ny mpandahateny hitondra any anaty kitapom-batsy isika na rehefa manao fanatanjahan-tena satria mpandahateny telo kilao izy io, saingy mamela ny mpampiasa haka azy io avy amin'ny efitrano fandraisam-bahiny mankany amin'ny pisinina, mankany amin'ny zaridaina, mankany ny morontsiraka na aiza na aiza misaotra azy Ny fifandraisana Bluetooth sy ny fanoherana IP56, izay mahatonga azy mahatohitra ny rano sy ny vovoka ary na dia mety hianjera aza, ilaina amin'ny mpandahateny voatendry hihetsika.
Sonos Roam, mpandahateny azo entina izay tsy mampandefitra ny kalitaon'ny feo sy ny heriny
Saingy handeha hamaky ampahany isika satria ity mpandahateny ity dia mihaona amin'ny maro amin'ireo safidy tadiavin'ny mpampiasa androany, mpandahateny handrenesana am-pahatoniana ny mozikantsika any an-trano ary ho afaka hitondra azy na aiza na aiza nefa tsy hahavery ny kalitaon'ny feo na ny heriny. Azo antoka fa ny olona rehetra nanatrika teo dia efa mahalala fa avy amin'ny Mac aho ary manokana manokana fa manana fahalemena amin'ireo mpandahateny ny orinasa Sonos aho ary izany dia mpandahateny avo lenta tokoa izy ireo. Izany dia nilaza fa ho hitantsika ny zavatra atolotray antsika ity dia ny Hetsika izay tsy omen'ny mpandahateny hafa mitovy amin'izany amin'ny marika hafa.
1 Ny fivezivezena, ny kalitaon'ny feo ary ny fifandraisana
2 Ny fomba fiampangana azy dia tsotra sy azo ampiharina amin'ny fizakan-tena feno habibiana
3 Haingana sy mora ny fametrahana ny Sonos Move
4 Fitaovana mahatalanjona ho an'ny mpandahateny mahatalanjona
Ny fivezivezena, ny kalitaon'ny feo ary ny fifandraisana
Azontsika atao ny mamintina ny tombotsoan'ity Sonos ity amin'ireo toetra telo ireo. Ny fivezivezin'ny Sonos dia mihena raha oharina amin'ny, ohatra, ny Sonos Roam fa ampy ho an'ireo mpampiasa te-hitondra ny mpandahateny na aiza na aiza ary mifandray mora foana amin'ny alàlan'ny Bluetooth. Ny fifandraisana Wi-Fi dia mamela ny Sonos Move hankafy ny MultiRoom sy AirPlay noho ny fifandraisana AirPlay 2 atolotra azy. Io dia ahafahanao mampifandray azy io mivantana amin'ny fitaovantsika ary ahafahanao manangona mpandahateny maromaro mora foana rehefa ao an-trano izahay.
Ny Sonos Move dia manolotra an'ity safidy ity na dia eo aza ny zava-misy izay nolazainay tany am-piandohana ny refiny (240x160x126 mm) sy ny lanjany (3 kg) Tsy mahafeno ny fepetra takiana amin'ny fivezivezena manokana izy ireo mba ho mpandahateny azo entina.
Ity Sonos Move ity dia nisolo Sonos iray izay nananako tao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny, ary ireo safidy azo ampitaina arosony miaraka amin'ny heriny sy ny kalitaon'ny feo manao azy amin'ny haavon'ny ApplePods. Saingy tsy miresaka momba ny HomePod mini izahay, tsia, miresaka momba ny HomePod tany am-boalohany isika, mpandahateny iray izay manana kalitaon'ny feo tena mahery setra izay tena mitovy amin'ny atolotry ny Move.
Tsy azo iadian-kevitra tanteraka ny kalitaon'ny feo, ny Sonos Move dia tsy ampy hery, tsy isalasalana fa mahagaga izany rehefa apetrakao amin'ny farany ambony ny volantsika. Ny fandaminana ireo mpandahateny ao amin'ity Hetsika ity dia mahatonga azy ho mpandahateny "omni-direction" ary noho izany dia nohatsaraina tsara ny kalitao, zavatra izay tsy ananantsika ao amin'ny Sonos One. Tena tsara ny kalitaon'ny feo, tsy afaka mangataka bebe kokoa ianao.
Ny fomba fiampangana azy dia tsotra sy azo ampiharina amin'ny fizakan-tena feno habibiana
Mazava ho azy, ity Move ity dia manana zavatra tena tsara ary ny andiana feo sy endrika ary ny hafa dia tena fisainana tsara. Etsy ankilany Izahay dia manana ny base na peratra miampanga izay no fomba tsara indrindra hiampangana an'io Hetsika io fa manana port USB C koa hampifandray ny tariby raha tsy te hampiasa ny base isika.
Ny mpampiasa dia tsy maintsy mametraka ny fanamafisam-peo eo ambonin'ilay peratra fotsiny ary ampidirina amin'ny alàlan'ny mpampitohy eo amin'ny farany ambany izy io, mba hanesorana azy fotsiny amin'ny alàlan'ny tahony aoriana ary afaka mitondra azy na aiza na aiza. Raha ny lojika dia manana ny safidintsika koa isika ampidiro amin'ny alàlan'ny port USB Type-C izay ampidiriny ao aoriana an'ny mpandahateny raha sendra lavitra ny trano isika ary mila mitaky izany.
Ny fizakantenan'ity mpandahateny ity dia tsy isalasalana fa iray amin'ny tanjaka ananany manome bateria hatramin'ny 10 ora ny bateria misaotra ny fahaizan'ity. Ny fiampangana feno an'ny mpandahateny dia tsy maharitra ela fa marina fa mila adiny roa eo ho eo isika handraisana ilay Hetsika avy amin'ny 30 ka hatramin'ny 100% ny bateriny. Raha mampiasa an'io Hetsika io amin'ny avo be isika, dia lozika kely fa hihena kely ireo playback mandritra ny 10 ora ireo, saingy tena gaga ny bateria noho ny fahaizany sy ny fiaretany amin'ny playback mozika.
Sonos Arc famerenana, ny bara farany ho an'ny efitrano fandraisam-bahininao
Haingana sy mora ny fametrahana ny Sonos Move
Ny rindranasa Sonos izay noresahintsika tamin'ny tranga teo aloha dia noho ireo mpandahateny marika rehetra izay efa nosedraina izay manolotra ny mpampiasa fomba tsotra mampifandray ny kaonty Apple Music, Amazon Music ary Spotify.
Raha vantany vao ampodinao ny mpandahateny dia mila entinao manakaiky kokoa ny iPhone ary miseho ilay kisary Sonos mba hahafahanao manaraka ny dingana fandaminana. Tena tsotra sy haingana dia tsy hanana olana na inona na inona koa ianao, rehefa avy nandamina ny mpandahateny tamin'ny voalohany ianao dia ho afaka mampihetsika mora foana ny Alexa na Google Assistant amin'ny alàlan'ny fidirana amin'ny Move in the Sonos App.
Avy amin'ny fampiharana Sonos ihany koa afaka mitantana haingana ny anaran'ilay mpandahateny amin'ny toerana misy azy isika, manamboara lapoaly ho an'ny stereo, kitiho ny ekipana, ahitanao ny Trueplay mandeha ho azy, ampio fetran'ny volavola mba tsy ho be loatra ny feo azontsika atao ampifanaraho koa ny jiro toeto na fanaraha-maso mikasika mba hamonoana azy ireo. Ireo safidy rehetra ireo dia natao avy amin'ny fampiharana Sonos ary azo alaina amin'ny mpampiasa rehetra amin'ny fomba tsotra sy mazava.
Fitaovana mahatalanjona ho an'ny mpandahateny mahatalanjona
Ireo kojakoja izay hitantsika ao amin'ny tranokala Sonos ho an'ity mpandahateny ity dia amin'ny ambaratonga iray ihany. Manana tamboho manda maromaro izahay, bateria ivelany na kitapo fitaterana izay manome ny fahafaha-mitondra ny Mov amin'ny toerana rehetra soa aman-tsara. Kitapo feno padded ao anatiny, somary henjana any ivelany hisorohana ny bontsibontsina, miaraka amina fanamafisana eo an-tampony ary na zipper aza mba ahafahanao mitondra ny tariby mameno entana ao anatiny sy kojakoja hafa.
Antsoina ity kitapo mitondra ity Travel Bag ary ahitanao izany amin'ny 89 euro amin'ny tranokala Sonos ary tena mendrika izany raha mikasa ny hitondra ny mpandahateny lavitra ny trano ianao, mankany amin'ny pisinina, na amin'ny toeran-kafa satria miaro azy amin'ny fomba tena tsara ary manolotra fampiononana ho an'ny mpandahateny.
Ho an'ny 35 euro dia hitantsika ny fiakaran'ny rindrin'ny Sonos Move. Tena mora ny mametraka rindrina ary tsy maintsy apetrakao amin'ny rindrina fotsiny ny fotony na amin'ny toerana tianay ahantona ny Sonos, apetraho ny plug, ny visy ary ny fehikibo mba tsy hanimba ny mpandahateny any aoriana. Mba hanesorana azy amin'ny fanohanana dia mila alainao fotsiny ilay Hetsika amin'ny vodin-tànana any aoriana dia misintona ianao.
Misy rindrina misy rindrina koa izay mitazona ny mpandahateny mivantana avy any ambany sy azo esorina ao amin'ity mpandahateny ity ny bateria Ka raha misy olana mandritra ny taona maro dia azontsika ovaina amin'ny fomba vaovao amin'ny fomba tsotra ity, atolotro antsika ity bateria fanampiny amin'ny vidiny 79 euro.
Ity mpandahateny ity dia tena mihoatra ny nandrasana nantenaintsika. Ireo mpampiasa rehetra mila fanamafisam-peo ento amin'ny toerana iray any an-trano izany na koa ento mankany amin'ny dobo filomanosana, zaridaina, moron-dranomasina na mitovy amin'izany dia eo alohan'ny mpandahateny tonga lafatra ny Sonos Move dia mpandahateny anao.
La kalitaon'ny feo, ny heriny ary ny fizakantenany lehibe ataovy torohevitra tena tsara ny seta na dia tsy tianao esorina ao an-trano aza ity mpandahateny ity, ary tsy tena miatrika mpandahateny portable izahay hampiasaina na farafaharatsiny dia hevitra tsy mitovy amin'ny mpandahateny portable mihitsy no tsy azontsika eritreretina . Ireo fitaovana nanaovana azy, ny endrika ary amin'ny ankapobeny ny setany iray manontolo dia toa mahavariana antsika. Ny vidin'ity Sonos Move ity dia 399 euro, vidiny izay tsy ambany fa ny ho an'ny kalitaon'ny setriny ankapobeny dia azo ekena kokoa.
Kalitao sy famolavolana audio tsara
Safidy azo entina
Fanamorana ny fampiasana, ny fametrahana ary ny famolavolana
Tonga amin'ny vidiny ny kalitao
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Solosaina Mac » Accessories » Notsapainay ny Sonos Move, mpandahateny tokana
macOS Monterey sy iOS 15 dia hamela anao handraikitra horonan-tsary lalao avy amin'ny mpanara-maso mifanentana